Dawladdii Muse Bixi Oo Fashilantay
Wednesday November 20, 2019 - 09:05:15 in Articles by Hadhwanaag News
Waayahii la arkaaba waayo dheh, anna waan yaabay muuse bixi
ayaa noqon madaxweyne lagu badhaadho waxaan si fiican u rumaysatay sheekooyinkii laga werenaayey dagaalkii sokeeyaa ee 1993,1994, aniga oo aan sii wadwadayn oo dhaahdiisii waa wax sida qoraxda u cad oo siduu u naqmayo ayey ka muuqataa, waxaa kaloo cad inuu isagu waxa layidhaa jeegaan abuuray ama bixiyey.
Madaxweyne muse waxuu isu haystaa inuu weli ku jiro tartankii ee aanu weli gaadhin kursigii dalka siduu weli u fogsynayo bulsho ka mid ah dadka uu madaxweynaha u yahay.
Waxaa la yidhi ha la bedelo manay jiri jirin komoshinkii ina soo maray oo dhan in qaar la soo reebay, haddaba waxaa cad inuu qabyaalad iyo caragsi u sameenayo, mana aha dhaqan madaxweyne dal iyo dadna sidaa kuma dhismaan
Madaxweyne waxuu door biday mar haddanu hayn aragti ( vision) inuu murunkaa iyo ku jiqsiidaa ku jiro inta waqtigu ka dhacayo.
Madaxweynu si qiiq isku qarisa ayuu maalinkasta isaga maagaa madaxweyne farmaajo waa jubaadkiisii madaxweyne gudanaya isaguna markuu tahli waayey inuu waa jibaadkiisu wax ka qabto muran iyo isdaba meeraalaysi mooyaane.
Madaxweyne muse maalinjasta sharciga ayuu jebeniyaa manuu akhriyin shuruucda dalka,
Haddaba dadka reer Somaliland oo isku duuban waxaa waajib ku ah siday dalkooda darxumada soo socota ka hortagaan haddii uu isbedel wax ku oil ah keeni waayo habdhaqankii iyo maamulkiisa inay meel uga soo wada jeestaan oo kursiga ka tuuraan wuu inagu soo qaldamay manaha sidaynu ka filaynay e